Ny fampirantiana dia tsy mitovy amin'ny vokany: Fotoana tokony hijanonana amin'ny fampiasana fihetsiketsehana handrefesana ny lanja | Martech Zone
Ny fampirantiana dia tsy mitovy amin'ny fiantraikany: fotoana tokony hijanonana amin'ny fampiasana fiheverana handrefesana ny lanjany
Alatsinainy, Jolay 15, 2019 Alatsinainy, Jolay 15, 2019 Shannon Tucker
Inona no atao hoe fahatsapana?
Ny fiheverana dia ny isan'ny eyeballs mety hitranga amin'ny tantaranao na ny media sosialy mifototra amin'ny mpamaky / mpijery tombanana ny fivoahana / loharano.
Amin'ny taona 2019, ihomehezana any ivelany ny fahatsapana. Tsy fahita matetika ny mahita fiheverana amina miliara. Misy olona 7 lavitrisa eto an-tany: manodidina ny 1 miliara amin'izy ireo no tsy manana herinaratra, ary ny ankamaroan'ny hafa tsy miraharaha ny lahatsoratrao. Raha manana fahatsapana 1 miliara ianao fa mivoaka ny varavaranao ary tsy misy olona afaka milaza aminao momba ilay lahatsoratra, dia manana metric sandoka ianao. Tsy lazaina intsony, firy amin'ireo fiheverana momba ny fifandraisam-bahoaka no bot fotsiny:
Bots dia nitondra ny 40% n'ny fifamoivoizana Internet tamin'ny taona 2018.
Distil Networks, Tatitra Bad Bot 2019
Hevero ho toy ny fifanarahana eo amin'ny fikambanana sy ny masoivohondohan'ny PR na eo aminao sy ny lehibenao ny tatitra ataonao isan-telo volana - izany no hamaritanay ny fahombiazana sy ny fomba ifanarahanay handrefesana izany. Mety mbola mila manome fahatsapana ianao satria ny client anao na ny lehibenao mangataka izany. Na izany aza, ny hafetsena dia ny fanaovana zavatra roa:
Omeo teny manodidina amin'ireo fahatsapana ireo
Omeo metatra fanampiny milaza tantara tsara kokoa izany.
Ny fanoloana ny refin'ny fifandraisana amin'ny daholobe dia mety ahitana:
Isan'ny fitarihana na fanovana. Mety hiakatra ampahefatry ny telovolana ny fientanentanana anao, saingy mbola fisaka ihany ny varotrao. Izany dia satria mety tsy mikendry ny olona mety ianao. Fantaro hoe firy ny vokatra azonao.
Fitsapana fanentanana: Mampiasa fitaovana toa ny Survey Monkey, olona firy no nahita ny vokatrao na ny fandraisanao andraikitra tamin'ny vaovao ary nanao fihetsika na nanova fitondran-tena noho izany?
Google Analyticss: Mitadiava spikes amin'ny fivezivezena amin'ny Internet rehefa mandeha ny vaovaonao. Raha misy backlink ao amin'ilay lahatsoratra, dia fantaro hoe ohatrinona ny olona tena nanindry ny tranonkalanao avy amin'ilay lahatsoratra ary jereo ny fotoana laniny tao.
A / B fitiliana. Lazao ny vokatra na varotra vaovao amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sy ny tambajotra sosialy fa omeo kaody fampiroboroboana samihafa izy ireo hahafantarana hoe iza no nahatonga ny fifamoivoizana (haino aman-jery na sosialy).
Famakafakana hafatra: Firy amin'ireo hafatra fototra napetrakao no tafiditra ao anatin'ireo lahatsoratra? Ny kalitao mihoatra ny habetsahana no zava-dehibe kokoa.
Diniho izao: mody hoe ao amin'ny efitrano iray miaraka amin'ireo mpifaninana aminao ianao. Mety hihorakoraka mafy ianao — fa ny mpifaninana mangina kosa dia mampiasa PR handroahana ny varotra, hampitombo ny fahatsiarovan-tena ary hanovana fiovana.
Ny PR tsara dia ny fampiasana ny haino aman-jery hanovana fahasamihafana — ary ny fitadiavana ny refy mety hahitana raha mandeha izany.
Tags: ab testingfanentananabots
Shannon dia matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe izay mahazo mpanjifa amin'ny vaovao. Shannon dia mino ny herin'ny fifandraisan'ny daholobe amin'ny alàlan'ny fampitambarana haino aman-jery voaloa, karama ary tompony. Shannon dia talen'ny fifandraisana haino aman-jery ao amin'ny SSPR.
Ny sandan'ny Connector mifanohitra amin'ny Influencer
Torohevitra avy amin'ny tranokala avo lenta